Times Of Nepali » सतिले सरापेको देशमा रबिलाई फासिको सजाय देउ : अनि सबै बाटो खुल्ला रहनेछ।
गुहार मागीरहेकी एउटि नेपाली चेलिको आशु पुछ्ने रबि, दलालको पन्जामा परेर लुटियको गाउले केटो,सेवाग्राहीलाइ टेबल मुनिबाट हात थापेर ठग्ने लुट्ने कर्मचारी,बिदेशी कम्पनीले तलब नदियर घर न घाटको बनायका नेपाली आमाका सपुतहरुलाइ उद्दार गर्ने रबि राजदुत र दुताबासका कर्मचारिको लापर्बाहीको धज्जिया उडाउने रबी, आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर अरुको ज्यानका लागी चौबिसै घन्टा नसुती चिन्तन गर्ने रबी, म कसरी पत्याउ, तिमि अपराधी हौ भनेर ? भन्ने ले भन्छन अमेरिका बस्न सकेन।।
फस्ने भयर फर्कियो भाग्यो अमेरीका बस्न नसके क्यानाडा अस्ट्रीलिया जान्थेउ होला। फेरि आर्को जिबन सुरु गर्थेउ होला आफ्नै जिन्दगी र आफ्नै खुशिमा रमाउथेउ होला यो सतिले सरापेको देश किन फर्किन्थेउ ? तिम्रो मुटुको कुनामा नेपालआमाको माया कहिँ कतै थियो र त फेरि एहि देशमा आयर प्राण हत्केलामा राखेउ ,म कसरी पत्याउ, तिमि अपराधी हौ भनेर ? म कल्पना कसरी गरुँ कसरी मन्दिरको देउता माथी अबिश्वास गरु, जस्लाइ करोडौले पुजिरहेछन, उहि अपराधी हो भनेर म कसरी निर्धक्क बोल्न सकुँ?
म कसरी पत्याउ, तिमि अपराधी हौ भनेर ? एउटा दियो बलेको थियो आशाको एउटा बिरुवा हुर्केको थियो सुन्दरता : एउटा कर्म जन्मिरहेको थियो सिस्टमको एउटा सपुत जन्मीरहेको थियो नेपाल आमाको
म कसरी पत्याउ, तिमि अपराधी हौ भनेर ? रबी, तिमि साच्चै फसेउ वा उम्केर पनी कम्जोर भयौ,र बाटो बिरायौ भने अब कस्ले देला गुहार, ठगियका नेपालीलाइ ? अब कस्ले आसा जगाइदेला ,तिम्रो मुहार हेरेर प्रतिक्षा गरिरहेका जनतालाइ ,यति सम्म तिमि मन मनमा बसेका थियौ कि ,म कसरी पत्याउ, तिमि अपराधी हौ भनेर ?
तर म एउटा कुरामा खुशी छु रबि, यदि तिमि हत्यारा नै साबित भयौ भने , काराघरमा सुरक्षित त रहन्छौ , यदि तिमि न्याय पायर छुट्यौ भने अब अपराधिको शिकार तिमि हुदैनौ भनेर ,म कसरी बिश्वास गरु ? भन्दै छ दुनिया तिमिलाइ हत्यारा , तर रबी म कसरी पत्याउ, तिमि अपराधी हौ भनेर ?
लेखक : गौरब पनेरु (मलाइ अन्धभक्तको बिल्ला भिराइदेउ केहि फरक पर्दन)
प्रकाशित मिति १ भाद्र २०७६, आईतवार १०:४१